Dariiqaa Bur-Buray Iyo Daasadaa Guuxaysa Ayaa Dadkeeni Ku Idlaaday. W/Q: Abdrashiid Awmuse Aadan (igmaawi) – somalilandtoday.com
Asc. dhamaan akhristayaasha karaamadaleh ramadaan Kariim,
waxaa muuqdaoo sida cedceeda ucad shilalka gaadiidka iyo dadka ku dhimanaya oo intii ka hore ka badan somaliland .
Sanad walba waxaa sii kordha dadka shilalka gaadiidak ku dhinta wadankeena bishaa ramadaan waxaa la sheegayaa tirada dhimashadagaadiidaka inay kor udhaaftay 30 qofwaa muda 7cisho ah.
Waxatan garab taala xili roobaadka dooxyada udhexeeyagobolada dalka oo dhibaatoxoogani ka taagantay, waxaa ka sii daran qorsha laanta dad iyo dawladba inaga haysta dhibataadan macmiilka noqtay ee wadooyinka iyo gadiidka iyo dooxyadaba ah .
Hadaba maxaa qaldan ma engineers-ka, ma plan-ka mise inaga ayaan awoodin in aynu 30 sano oo ayn gaar utaaganay waddo quality leh helno aan u bislayn , doodaydu maaha maxaa wadooyinka oo dhan loo hagaajin waayay waayo dhaqaale ahaan ayaynaan awoodinee waxa weeye waar maxaa inoo diiday haba yaraatee 20KM noqotee in yar oo leh tayo-fiican( road quality). Dawladihii kaladambeeyay eekulmiye wax wayn baan ka saarayaa arintaa.!!
Gaba-gabadii waxaa ugu horayn looga baahanyaydawlada in ay wadooyinka dalka usamayso qorshe ka sareeye kan hada lagu wado ee kacaa kufka ah ee dawladaha hoose iyo mashaariica ah dhiciska ah, waxaan kaloo soo jeedin lahaa in wadooyinka loo sameeyo hay-ad ka tayo roon tan ahaatan faraha kula jirta ee warba ka ahyinin. Waxaa iyana loo baahan yay in lagu soo jeedyo indhaha caalamka, deeq bixiyayaasha , ururada bulshada iyo dhamaan daneeyeyaasha halka ay reero la rafanayaan wadooyin raf ah oo aan tayo lahayn.
W/Q: Abdrashiid Awmuse Aadan